विहेको केहि दिन अघि प्रेमीका गु,मा,ए,का प्रकाशले भ्यालेनटाईन डे को दिन ३ करोड नेपालीलाई रुवाउने के गरे यस्तो ? – " सुलभ खबर "
विहेको केहि दिन अघि प्रेमीका गु,मा,ए,का प्रकाशले भ्यालेनटाईन डे को दिन ३ करोड नेपालीलाई रुवाउने के गरे यस्तो ?
उनले लेखेका छन् ” मान्छे जस्तोसुकै किन नहोस् । मन लाई माया गर्ने मायाको कदर गर्ने एक राम्रो जोडी बनेर लाइभ सँगै बिताउन हिम्मत राख्ने हरेक प्रेमी जोडीहरु लाई प्रेम दिवसको शुभकामना ।”
Manchxe jasto sukai kin nahos man lai maya garne mayako kadar garne ek ramro jodi baner life sangai bitauna himmat rakhne harek premi jodi haru lai prem diwas ko suvakaamana?????????????best of luck sabai lai..
تم النشر بواسطة ‏‎Pra Kash‎‏ في الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٠
सात जनमको माया तिमीलाई बुढी सायद तेरो खुशी यो पापी दुनियाँले हेर्न सकेन है । तर यो जुनिमा मात्रै होइन फुच्ची सातै जनमसम्म तिमीलाई माया गरिरहन्छु यो मुटुमा त मात्र छस् । तेरो ठाउँ कसैले पाउने छैन बुढी । छाडेर गइस है । धेरै दिन भयो वेवी तिम्रो फोन र एसएमएस आएको
छैन कसैको कल वा एसएमएस आएपनि आत्तिएर झट्ट हेर्छु कि तिमीले एसएमएस गरेउ कि भने । मेरो आँखामा मेरो आत्मामा बसेको छउ तिम्रो मायाको कदर गर्ने छुँ । सँधै बुढी दुनियाको सबै प्रेमीहरुलाई तिम्रो जस्तै माया गरुन यो मायाको अस्तित्व राखुन् । आइ लभ यू फरइभर मेरो मुटु मिस ग ब्याड्ली । ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे मेरो फूच्ची ।
7 janam ko maya timi lai budhi…sayad tero khusi yo papi duniyale herna saken hai..tara yo junima matrai hoin fuchxee…